मलाई "VO COC" बनाउने मास्टरहरू - भियतनाम स्टडीजको पवित्र भूमि
703 दृश्य0टिप्पणिहरु
के हो "Vo Coc"? यसको नाम थाहा पाउनुको सट्टा "म यसको आफ्नै आकार देख्दा आफ्नै नाममा कल गर्दछु - जंगल वा क्षेत्रहरूबाट - बीचमा नामकरण गर्न "नाइट भटकनेवाला"। मार्शल आर्टहरू जुन मैले परिचय गरेको हो "Võ rừng - जंगल मार्शल आर्ट" or "Võ ruộng - फिल्ड मार्शल आर्ट", "Võ đường phố - Street मार्शल आर्ट", "अन्धा गल्ली मार्शल आर्ट"वा "Võ giang hồ - भटकने मार्शल आर्ट"?!
मेरो युवावस्थामा, मैले कसैलाई त्यस्तो मार्शल आर्ट्स प्रदर्शन गरेको देखेको छैन, केवल सुन्नुहोस्, बस हेर्नुहोस् टाइगर फारम (बाघ शैली), बाँदर फारम (बाँदर शैली) सर्प फारम (सर्प शैली) वा फीनिक्स फारम पखेटा भन्दा माथि हात माथि। सामान्यतया, मानिस प्राय जसो मार्शल आर्ट सिर्जना गर्न जनावरहरूको गति, नक्कलको जनावरको शैलीलाई जनावरहरूको शैलीको रूपमा सुरूमा आत्मरक्षाको लागि लड्न नक्कल गर्दछ। तर व्यक्ति प्राय जसो टुडका लागि ध्यान दिदैनन्। के तिनीहरू मार्शल आर्टको यस प्रकारको वर्णन गर्छन्? Tieu Ngao Giang हो or अन्ह हंग एक्स डियु? वा अफ्रिकाको कुनै देशबाट - दुई गैंडा सी hornहरूको साथ - वा दक्षिणपूर्व एशियामा - गैंडाको सी hornको साथ - लुकेको रहस्य, वा अँध्यारो ज in्गलमा, वा गरीब छेउको दलदलको क्षेत्र ?!
यो दिउँसो थियो ... मलाई याद छ। त्यसबेला म एक स्कूलका साथी थिए। स्कूलबाट म घरको ढोकामै आएँ - रेलमार्ग ट्र्याक द्वारा - गेट १, साईगोनको क्षेत्रमा। मैले भेटे "बोतल केटा" ढु the्गामा बसिरहेको उसको पछाडि - एउटा बोरा, उसको खुट्टामा - पहेंलो कुकुर। ऊ चुपचाप बस्यो, मेरो अघि नहेर्ने उता हेर्दै - त्यो केटो जो उसको सामने माटोको देवता जस्तो उभिरहेको थियो। - तिमी कहाँको हौं? "एक bum?"
मेरो आवाज शैली को रूपमा "साइगोनमा हड्डी" आफ्नो नोटिस सोध्न तर उहाँलाई ध्यान दिएन।
यसको जिब्रो बाहिरको कुकुरले मलाई यसको आकृतिको रूपमा हेर्यो "अभिवादन" यसको मालिकको तर्फबाट। यसैले यो थियो "विनम्र" त म मेरो आवाज शान्त गर्छु।
- के तपाईं गलत बाटोमा जानुहुन्छ?
- No! भर्खर खेल्दै! ठिक छ?
मैले जवाफ दिएन तर मैले लगातार सोध्नको लागि मेरो चिनी बढाए:
- के तपाई एक बोतल मान्छे हो?
उसले होस्यो, तर उसको आँखा थियो "अनौंठो" मेरो लागी। यसैले यो प्रयोग गर्न ठीक थियो उहाँलाई! म उनको छेउमा बसे। कुकुरले आफ्नो पुच्छर मैत्री ध्वनी गर्नका लागि चलायो।
- के तपाईंको घर छ?
उसले आफ्नो टाउको हल्लायो।
- राम्रो! अँध्यारो छ, तपाईं यहाँ बस्नुहुन्छ।
उसले मलाई हेर्यो?
- के यो ठीक छ?
- हो, म अन्तर-परिवार को प्रमुख बताउँछु।
यस्तो लाग्यो कि म हुँ "एक नेता" तर अझै पाउँदैछ "एक गिरोह मालिक"।
त्यसबेलादेखि, मसँग थियो "दुई साथी" - उहाँ र कुकुर। हरेक बिहान, उसले ढोका १ देखि किलोमिटर ११ सम्म रेलमार्ग ट्र्याकको साथ बेकारका सामानहरू लिन बोरा बोक्दछ र त्यसपछि सिधा गो भ्याप, डि अनमा जान्छ। कुकुर जस्तै दौडियो Te Thien भिक्षुलाई सहयोग गर्न ताम टाang, गए र मा फर्कियो "रेशम रोड"। दिउँसो, शिक्षक र विद्यार्थी ट्र्याकको नजिकको बेन्चमा सुत्न फर्के।
फिगर: भो कोक - मार्शल आर्ट
दिउँसोसम्ममा, घाम लाग्यो, बोतलहरू केटा चाँडै फर्किए र केही खेर फालिएको सामग्रीले लगाएको बोरा समात्यो। बोतल, फूलदान, टुक्रिएको भाँडो, तल बिना भाँडो, बोतलहरू डी साउत (प्यारासुट बुट) चीराहरूमा, फाँटिएको प्यान्टहरू ... उनीहरू "नयाँ सामानहरू" देखिन् - जसलाई म मतलब गर्दिन। त्यसपछि म उल्टो - एक bum आवाज।
- थाई Binh बजार जाऔं।
ऊ हप्दै त्यसपछि मसँग गयो। कुकुर हाम्रो पछाडि दौड्यो - जस्तै एक नयाँ साहसिक कार्यमा हिडिरहेको - सडक पार गर्दै जुन उसको जीवनलाई केहि पनि थाहा थिएन, एउटा अनुयायी। बोतलको केटाको लागि, शहर जाने सम्पूर्ण बाटो अपरिचित थियो, किनभने यो उसको जीवनको लागि कमाउने राम्रो तरिका थिएन। गल्लीमा तीन दिशाहरूसहित, ग्यास स्टेशनको देब्रेपट्टि थाई बिन्ह मार्केट थियो, दायाँमा खई होन थिएटर थियो, मैदानमा पछाडि लनमा भेला भएका भीडहरूको साथ हेर्दै हामीले प्रयास ग tried्यौं। यात्रुहरू हेर्नका लागि जम्मा भएका त्यो के थियो हेर्नुहोस् "शेन्डोंग मार्शल आर्ट मेडिसिन प्रदर्शन"। तर तिनीहरू दुई फ्रान्सेली पुरुषहरू थिए - एक सानो मानिस र भालुको साथ एक ठूलो मान्छे। उनीहरू सेता वर्दी, एक कालो बेल्ट र अर्को सेतोमा मार्शल आर्ट गर्दै थिए।
मैले भर्खर देखा पर्दा त्यो सानो मान्छेले मलाई ल्यानमा समात्यो र मलाई बनाउने जुडो टेक्निकले मलाई हिर्कायो तल आकाश झर्ने र उनी मेरो घाँटी सफा गर स्वतन्त्र रूपमा। अचम्म! मैले केहि पहिचान गर्न सकेन तर हतियार र खुट्टा हडबड्यो, त्यसपछि फेरियो! अचानक, बोतलहरू च्याटिएको बच्चाले त्यसपछि सानो फ्रान्सेली मान्छेको टाउकोमा लात हान्यो जसले उसलाई मलाई नराम्रो तुल्यायो। त्यसो भए म उठें! कुकुरले ठूलो स्वरले भौंक्यो! त्यसो भए!
तुरुन्तै, ठुलो फ्रान्सेली मानिस बोतलको केटो समात्न ड्यास भयो, ऊ फर्कियो। फ्रान्सेली मानिस मार्शल आर्ट प्रविधिको प्रत्यक्ष पंचको साथ हिट गर्न पुगे। बोतलहरू केटा दायाँ पट्टि फर्किएर बाँया तिर नहेर्न। ठुलो फ्रान्सेली मानिस बोतलको केटालाई लात हिर्काउन आयो। सबै शरीर चकित "ओह"। कसैले चिच्याए "दायाँ बायाँ हेर्नुहोस्! दायाँ बायाँ हेर्नुहोस्!"
बोतलहरु केटा दायाँ उफ्रे। कुनै दक्षता छैन, ठूलो फ्रान्सेली मानिस बाहिर बाहिर तान्न चक्कु आफ्नो ट्राउजर खुट्टा बाट। यो डगर थियो। सबै शरीर टाढा पछि हटे। म कुकुर संग पछाडि हिर्काए पछि एक गार्ड स्थिति संग उभिए। वातावरण तनावपूर्ण थियो। त्यसबेला सबैको आँखाहरू बोतलको केटामा थिए। उसले अझै बोरा बोकेको छ। उनले आफ्नो प्रविधिको बाटो हेर्न फ्रान्सेली मानिसलाई हेरे। "झोला तल राख्नुहोस्!" कसैले कराए उसले झोला तल राख्यो। फ्रान्सेली मानिसले उनलाई लगातार डगरले आक्रमण गरे। उसले आफ्नो शरीरलाई मिठो पार्नुभयो र त्यसपछि खुट्टा बाहिर तल झर्नुभयो र भित्र, बायाँ सारिनुभयो, एउटा ड्याडको रूपमा। फ्रान्सेली मानिसलाई कसरी हिट गर्ने भनेर थाहा थिएन, त्यसपछि ड्यागरको माथिबाट हिर्काउन झुके। सबै शरीर कराए:
- हे! ट्याड, टाढा उफ्रिनुहोस्!
बिना भनेको, "थांग कोक" - अब नयाँ उपनामको साथ - ग्रीस बिजुलीजस्तै पल्टियो र फ्रान्सेली मान्छेको हात समात्ने ड्यागरमा डबल खुट्टाले लात हान्यो। डगरले आफ्नो हात छोड्यो र घाँसमा लडियो। थांग कोक डगरलाई "प्रदर्शन" लिनका लागि उल्टाइयो तर प्रयोग गरेन। सबैले ठूलो स्वरले प्रशंसा गरे। दयनीय अवस्थामा, फ्रान्सेली मानिस हिट भयो थांग कोक संयोगवश थांग कोक यसबाट बच्नको लागि सारियो त्यसपछि अचानक फ्रान्सेली मानिसका कम्मरमा लात। त्यसपछि उसले हातले आफ्नो लहलहातिर घेरा हाले। सबैले फेरि ठूलो स्वरले प्रशंसा गरे। दुई फ्रान्सेली मान्छेहरू विपरीत धेरै मंजिला घरहरूमा भाग्नको लागि संकेत दिए। तिनीहरू भागे र कराए “Màc xà lù! A - nam - mit (Fuck you, भियतनामी!) "
सबैले गहिरो बदलाको बदला लिन हामी तीनजनालाई समाते। विशेष गरी, कुकुरलाई मानिसहरूले आकाशमा फ्याँकिदिए। त्यसपछि होल्ड गर्नुहोस्! त्यसपछि फेंक! हुर्रे। कुकुर चिच्यायो। मलाई अलि “ईर्ष्या” लाग्यो। यो निकट लडाई मा यसको कुनै उपलब्धि थिएन तर "भौंक, भोक, बार्किंग"। तर मैले अचानक महसुस गरें कि ऊ तुरहीको अन्नली जस्तो भुँक्यो। यसले थप भुक्ल्यो, सेनाले बढी आक्रमण गर्‍यो। त्यसैले बोतलहरू केटाको समर्थन टोली थियो। उहाँ आत्म-विश्वास र कठोर थियो। यसैले लडाई सफलतापूर्वक समाप्त भयो। सबै व्यक्तिहरूले कुकुरलाई तल तल झारिरहे! यो "भौंकियो, भुक्लियो, भौंकियो"।
पहिलो उदाहरणमा मैले यस उपलब्धिलाई मूल्याated्कन गरें, बोतलको केटाले १० पोइन्ट पाउन योग्यको थियो। र मसँग points पोइन्टहरू थिए "लडाईको रणनीति" बाट युद्धको कारण। यद्यपि म विपक्षीहरूले मलाई समातेर यातना दिएका थिए। भाग्यवश मलाई समयमा उद्धार गरिएको थियो। त्यसैले मेरो योग्यता points पोइन्ट हुनुपर्‍यो। तर बिस्तारै, मैले सोचे कि कुकुर points पोइन्ट हुनुपर्दछ। स्पष्ट छ कि यो "तोप" को लागी एक तोप आगो जस्तै "डराउन" र दुश्मनको आत्मा लाई कमजोर बनायो। यस पछि, मलाई लाग्यो कि कुकुर 10 अ de्कको योग्य छ।
तब सबैले स्वचालित रूपमा भंग भयो। त्यो पछि पुलिस आयो र ठूलो स्वरमा सिट्टी बजायो! थाँहा बिन बजारमा एक लुटेराले बुत्ताको रूपमा डगर पक्राउ गर्यो। त्यसबेलादेखि मेरो मनमा उसको साथी वा शिक्षकको रूपमा सम्मान र आदरको कुरा थियो!
एक दिन मैले त्यस भाइलाई सोधें:
- तपाईं मार्शल आर्ट थाहा छ!
ऊ मौन थियो।
फिगर: Vo Coc - Nguyen Manh हंग
- मार्शल आर्ट शाखा के हो! यसको बारेमा कुरा गर्नुहोस्!
ऊ पनि चुप लाग्यो।
- टोड मार्शल आर्ट? यो जस्तो देखिनुहोस्!
उसले पनि केही भनेन!
तर पूर्णिमाको रातमा, थांग कोक मलाई स्ट्यान्ड्स अभ्यास गर्न बोलाउँदछ र त्यसपछि श्वास छोड्दैन। केही दिन पछि, उसले मलाई हात र खुट्टा चार दिशातिर लैजान सिकायो, एउटा खुट्टा पछाडि र अर्को बाहिर तानियो। त्यसपछि उसले मलाई दुबै हातको औंलाहरु द्वारा भूमि छुन बताउन शक्ति परीक्षण गर्न। फेरी एक महिला नर्तकको रूपमा दुई खुट्टा फ्लैट सेट।
त्यस पछि उसले मलाई एक जग्गाको रूपमा सिकायो "टोड" मैले सायगोनदेखि मा ला Lang्ग, नगा बा चू आईए वा ज़ोम कुईदेखि फु लामसम्मको मेरो जीवनको कुनै पनि मार्शल आर्ट स्कूलमा यो पहिले कहिल्यै देखेको छैन। त्यसपछि जापान, फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटाली,
जर्मनी, ओक्लिओस्लो यिसिकिया…, पछि, मैले कसैलाई त्यस्तो मार्शल आर्ट गरेको देखेको छैन!
र मलाई अझै पनि यसको जरा थाहा थिएन "थांग कोक" उहाँ कहाँबाट आउनुभयो र उसको मालिक को थियो? निस्सन्देह, उसले मास्टरलाई पराजित गर्नुपर्‍यो। उसको जीवन कस्तो थियो? मैले यो अवसर गुमाइन!
१. सहयोगी प्रोफेसर, इतिहासको डॉक्टर।
◊ मास्टरहरू जसले मलाई "भो कोक" - भि-वर्सिगु
◊ मास्टरहरू जसले मलाई "Vo Coc" - फ्रि - वर्सिगु
◊ मास्टरहरू जसले मलाई "Vo Coc" - ए-वर्सिगु गूढ्छन्
◊ मास्टरहरू जसले मलाई "Vo Coc" - Ch-VersiGoo टाई गर्छन्
◊ मास्टरहरू जसले मलाई "Vo Coc" - Sp-VersiGoo टाई गर्छन्
Me मास्टरहरू जसले मलाई "Vo Coc" - TUU TUGU - TUGUGU
(देखिएको 150 पटक, 1 आज भ्रमणमा)
पोस्ट दृश्यहरू: 101
← WRESTLING - भियतनामको पारम्परिक ओलिम्पिकको एक रूप
मेरो "VO COC" खोज्दै →
आजको भ्रमण: 561
अन्तिम7दिन भ्रमणहरू: 7,631
कुल भ्रमण: 82,163